Apple waxay ku soo bandhigeysaa 10 moodellada Apple Watch iyo AirPods guddiga dhaqaalaha Eurasia | Waxaan ka socdaa mac
Shirkad kasta oo dooneysa inay iibiso nooc ka mid ah qalabka waa inay marka hore dhaaftaa miirayaasha hay'adaha awoodda u leh. Mareykanka gudaheeda waa FCC, Yurub gudaheeda Guddiga Dhaqaalaha Eurasia iyo Shiinaha waa Teena. Shirkadda ku taal Cupertino ayaa soo bandhigtay wax soo saarka cusub ee Apple ay suuqa ka bilaabi doonto bilaha soo socda ee Yurub oo aan ka dhex arki karno laba nooc oo cusub oo iPhone ah, sameecado dhegaha la gashado oo ku hoos jira magaca AirPods iyo illaa 10 nooc oo Apple Watch ah oo kala duwan. Haddii ay dhacdo in qof kasta uu shaki ka qabo soo bandhigista suurtagalka ah ama aan ahayn jiilka labaad ee Apple Watch ee nuxurka soo socda ee Sebtember 7, xogtan ayaa xaqiijineysa.
Sida Apple Insider ay daabacday, dukumintiga daadiyay macluumaad yar oo aan heli karno, oo ka baxsan magaca qalabka iyo lambarkooda. Kuwa ugu horreeya liiska ayaa ah Sameecadaha sameecadaha wireless-ka ah ee AirPods «Apple», taas oo tilmaami karta taas shirkaddu waxay horey u haysatay sameecadaha dhagaha ee aan ka hadalnay oo diyaar ah hore. In kasta oo ay noqon karto noocyada cusub ee sameecadaha dhagaha ee Beats ee ay shirkaddu mar hore ku soo bandhigeyso magaceeda. Waxaa marba marka ka dambeysa sii kordheysa oo iska cad in xarka 3,5 mm uu leeyahay maalmihiisu tiro, marna ka wanaagsaneyn.
Marka xigta, anaga oo ka tagna midka na tusaya wax soo saar cusub oo ku saabsan Beats, waan heleynaa Qalabka elektaroonigga ah ee la qaadan karo ee loo yaqaan «Apple A1831 [..] (nooca software-ka ee watchOS 2). Ku darista wadarta 10 nooc oo Apple Watch cusub ah taas oo aan haatan laga heli karin suuqa. Waxa xiisaha leh ayaa ah inay suuqa ku dhufteen nooca loo yaqaan 'watchOS 2' mana ahan kii ugu dambeeyay ee suuqa ku dhufan doona maalmo gudahood.
Haddii aan sii wadno akhriska, waan arki karnaa Noocyada casriga ah ee casriga ah «Apple» nooca A1778, A1784 (macruufka 10 nooca software 10). Waqtigan xaadirka ah tiradaas looma isticmaalin nooc kale oo Apple ah, sidaa darteed hubaal waxaa loola jeedaa moodooyinka cusub ee iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus, taas oo xaqiijin doonta in aakhirka uusan jiri doonin qaab Pro ah sida lagu xaman jiray mararka qaar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Apple wuxuu ku soo bandhigayaa 10 moodellada Apple Watch iyo AirPods guddiga dhaqaalaha Eurasia